ကနဦးသတင်း.. ရွှေပြည်သာတံတားအဆင်း လူ (၉) ဦး သေဆုံးတဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုကြီး
Pop Pin New May 18, 2019
ကနဦးသတင်း.. ရွှေပြည်သာတံတားအဆင်း လူ (၉) ဦး သေဆုံးတဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုကြီး ရွှေပြည်သာ / ကနဦး သတင်း 18.5.2019 ဒီနေ့ညနေ့က ရွှေပြည်သာ တံတားအဆင်းမှာ အုတ်/သဲ ကားနဲ့ဖယ်ရီ (or ) ဘုရားဖူး ကားတိုက်ထားပါတယ် …… လူ၉ဦးသေဆုံးတယ်လို့ ကနဦးသတင်းအနေနဲ့ ရရှိပါတယ် ……. သတင်းအပြည့်စုံကို …
ရိုးရိုးသားသား အကြော်ရောင်းနေတဲ့ အကြော်သည်ကို မဝယ်ပဲခေါ်ပြီး ရန်စအနိုင်ကျင့် ခုနက မြင်​​တွေ့ရတာ စိတ်​ကို မ​ကောင်းဘူး😭😭 သူ့ကိုယ်​သူ ရိုးရိုးသားသား လုပ်​​ကိုင်​စား​သောက်​​နေတာကို ​၀ယ်​မယ်​ဆိုပြီး ​ခေါ်တယ်​တဲ့ ပြီး​တော့ မ၀ယ်​​တော့ဘူးဆိုပြီး ရန်​ရှာ​တော့ ​ရောင်းတဲ့လူက မ​ပေး​တော့နဲ့​ပြောတာကို ဆဲဆိုပြီး အ​ကြော်​ဗန်းကိုလှန်းကန်​ပြီး လူကိုလဲ ထိုးတယ်​တဲ့ ဆီပူ​တွေလဲ ​ခြေ​ထောက်​မှာ ရွှဲလို့. ကိုယ်​​တွေ ဆိုင်​ကယ်​ ဖြတ်​သွားတုန်း …
ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ တစ်နေ့တစ်နေ့ အုန်းသီးနဲ့ငှက်ပျောဖီးတွေအများကြီး ဆွမ်းတော်တင်ကြပါတယ်။ ဘုရားပေါ်က ဝန်ထမ်းတွေဟာ အဲဒီငှက်ပျောသီးစိမ်းတွေနဲ့ အုန်းသီးတွေကို တစ်ရက် နှစ်ကြိမ် စွန့်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို စွန့်လိုက်တဲ့ ငှက်ပျောသီးတွေက ဘယ်ရောက်သွားတာပါသလဲ? လူအချို့ ထင်နေကြသလို လွှင့်ပစ်လိုက်တာလည်း မဟုတ်သလို၊ ရောင်းစားလိုက်တာလည်း မဟုတ်ရပါဘူး။ အသီးတွေကို စွန့်ပြီးတဲ့အခါ ဝန်ထမ်းတွေဟာ သိုလှောင်ရုံတွေဆီကို ယူသွားကျပါတယ်။ သိုလှောင်ရုံမှာ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားပြီးတော့ တစ်ပိုင်းမှာ …
Sexy ကျကျအမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်လေးတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေကြားမှာရေပန်းစားအားပေးနေရတာကတော့မင်းသမီးချောလေးသင်ဇာဝင့်ကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့သူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့တူတူပုံရိပ်လေးတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေကြားမှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့မင်းသမီးတစ်ဦး ပဲဖြစ်ပါတယ် ပွဲအခမ်းအနားများစွာလည်း တောက်လျှောက်တက်နေရတဲ့ သူလေးတစ် ဦးဆိုရင်လည်းမမှားနိုင်ပါဘူး။ လတ်တလောမှာလည်း ခရီးတွေတောက်လျှောက်ဆိုသလိုထွက်နေရတာပါ။ သူမဟာ ဝေဖန်မှုတွေများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ သူမရဲ့အနုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်လက်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ် လတ်တလောမှာတော့ သင်ဇာဟာ စင်ကာပူကို ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး အိပ် ယာထဲကပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို Good Moening လို့နှုတ်ဆက်လိုက်လို က်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် သင်ဇာရဲ့ အိပ်ယာထက်ကပုံရိပ်လေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် ………………………… unicode …
(၁၆)နှစ်​အရွယ်နဝမတန်းကျောင်းသူအား အမဖြစ်သူရဲ့ယောက်ျားက ခိုးယူသွားမှု
စစ်​ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ကသာမြို့၊ရပ်​ကွက်​(၉)၊အပိုင်း(၁)၊ကန့်​ကော်​မြိုင်​တန်းနေ ဦးဖိုဖြူ+ဒေါ်ချိုချိုကြည်​ ၏သမီးအငယ်​ မနုယဉ်​ဝင်း (၁၆)နှစ်​၊နဝမတန်းကျောင်းသူအား၊ အမဖြစ်​သူ မအေးဖြူဖြူချို၏ခင်​ပွန်း ဖြစ်​သူမောင်​စည်​သူအောင်​(ခ)ဇော်​ဇော်​သည်​ ၁၆-၅-၂၀၁၉ ရက်​နေ့ နံနက်​ ၀၅း၀၀ နာရီအချိန်​ခန့်​ကဆိုင်​ကယ်​ဖြင့်​ခေါ်ယူသွားကြောင်းမြင်​တွေ့ရသောမိတ်​ဆွေများပြောပြသဖြင့်​သိရှိရသည်​ မိဘများကသတင်းသိရှိချိန်​လိုက်​လံရှာဖွေသောလည်​မတွေ့ရှိရသဖြင့်​ ၁၇-၅-၂၀၁၉ ရက်​နေ့ ကသာမြို့မရဲစခန်းတွင်​သမီးဖြစ်​သူ မနုယဉ်​ဝင်း အာခိုးယူသွားသော စည်​သူအောင်​(ခ)ဇော်​ဇော်​ အားဥပဒေအရအရေးယူဆောင်​ရွက်​ပေးပါရန်​တိုင်​ကြားသဖြင့်​ကသာမြို့မစခန်းမှအမှုဖွင့်​အရေးယူဆောင်​ရွက်​ထားပြီးဖြစ်​သည်​ စခန်းမှူး ဒုရဲမှူး မျိုးအောင်​မှတရားခံဖမ်းမိနိုင်​ရေးအတွက်​တရားခံသွားလာနိုင်​မည်​နယ်​မြေစခန်းများထံဆက်​သွယ်​သတင်းပို့ဆက်​သွယ်​ထားကြောင်းသိရှိရသည်​ လက်​ခံထားသူများကသက်​ဆိုင်​ရာ အုပ်​ချုပ်​ရေးမှူးနှင့်​ရဲစခန်းများသို့အကြောင်းကြားပေးပါရန်​နှင့်​သတင်းပေးအကြောင်းကြားခြင်းမရှိပါကဥပဒေအရဆက်​လက်​အရေးယူခြင်းခံရမည်​ဖြစ်​ပါကြောင်းသိရှိပါရန်​ရေးသားဖော်​ပြလိုက်​ရသည်​။ Mg Lay ………………………………. …
လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်ကြီး ထင်ကျော်က ကျရာဇာတ်ရုပ်မှာ တိတိကျကျနဲ့ အရည်အချင်းရှိရှိ သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် ဇာတ်ကားတော်တော်များများမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်ပေမယ့် စိတ်ထားလှတဲ့ သရုပ်ဆောင်ထင်ကျော်ရဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုက အခုဆိုရင် လူမှုကွန်ယက်မှာ တော်တော်လေး နာမည်ကြီးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြမ်းကြီး ထင်ကျော်နဲ့ ဘက်စ်ကားဂိတ်မှာ ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်က အခုလိုပဲ မျှဝေထားပါတယ် ” ပုံမှာပါတဲ့ ဦးလေးကြီးကို ကျွန်တော်တို့ …
မန္တလေး တွင် လမ်းသွားလမ်းလာများအား ဓားကိုင်ကာ အကြောင်းမဲ့ ခုတ်သူအား သေနတ်ဖြင့် အသေပစ်သတ်ဖမ်းဆည်း …
မန္တလေး တွင် လမ်းသွားလမ်းလာများအား ဓားကိုင်ကာ အကြောင်းမဲ့ ခုတ်သူအား သေနတ်ဖြင့် အသေပစ်သတ်ဖမ်းဆည်း … ၁၈.၅.၂၀၁၉ရက်နေ့နံနက်၎း၀၀ခန့်ကမန္တလေးအောင်မြေသာစံမြို့နယ်၁၄လမ်း၆၆လမ်းတွင် …အသက်၄၅နှစ်ခန့်အမျိုးသားတစ်ဦးဓါးရှည်ဖြင့်လမ်းသွားလမ်းလာများအားလိုက်ခုတ်နေကြောင်းတာဝန်သိပြည်သူများမှအကြောင်းကြားလာသဖြင့် …မန္တလေး တွင် လမ်းသွားလမ်းလာများအား ဓားကိုင်ကာ အကြောင်းမဲ့ ခုတ်သူအား သေနတ်ဖြင့် အသေပစ်သတ်ဖမ်းဆည်း ခဲ့သည် ….. ။နန်းတော်ရှေ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေအဖွဲ့မှနယ်မြေခံအမှတ်(၁)ရဲစခန်းသို့သွားရောက်အကြောင်းကြားခဲ့သည် ….. ။ အမှတ်(၁)ရဲစခန်းမှတာဝန်ရှိ့သူများရောက်ရှိ ဖမ်းဆည်းရာတွင် ပြန်လည်ခုခံနေသဖြင့်သေနတ်နှစ်ချက်ဖြင့်ပစ်ခတ်ဖမ်ဆည်းခဲ့ရာ …ဝဲဝမ်းဗိုက်/ဝဲလက်မောင်းဒါဏ်ရာရ ၄င်းဓါးကိုင်အမျိုးသားအားမန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရာနာရီဝက်ခန့်အကြာတွင်သေဆုံးသွားကြောင်းသိရှိခဲ့ရသည် …
၁၅ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးက မွေးပြီး မြေမြှုပ်ခဲ့သည့် ကလေးကို ခွေးက ပြန်ဖော်ကယ်တင် (ရုပ်သံ) ထိုင်းတောင်ပိုင်း နခွန်းဆီထမရတ်ခရိုင်ထဲမှာ ၁၅ နှစ်ရွယ် ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးက မွေးပြီး မြေမြှုပ်ထားတဲ့ မွေးစကလေးတယောက်ကို ခွေးတကောင်က ပြန်ဖော်ပြီး ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ် နခွန်းဆီထမရတ်ခရိုင် ချွန်းဖုန်းမြို့နယ် ထာ့လတ်ကျေးရွာအုပ်စု နောင်ခန်ကျေးရွာက နွားကျောင်းသမား နိုင်းအူဆာဆိုသူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ …
ထူး ထူြး ခားခြား အောင်မြင်မှုနဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်လိုက်ပြန်တဲ့ မြန်မာသမီးငယ်လေး အီ တ လီ နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော Hippo 7th International English Olympiad ပြိုင်ပွဲတွင် ဒုတိယဆု ရရှိခဲ့သော မဆုစန္ဒီဆွေက ယခုလိုဆုရရှိအောင် ကြိုးစားခဲ့ပုံနဲ့ ခုလို ဝေမျှသွားခဲ့ပါတယ်။English စာဆိုရင်တော့အကုန်လုံးပြိုင်ချင်တယ်။ ပြီးတော့ အီတလီလည်း သွားရမယ်ဆိုတော့ …
ရေခဲတောင်တက်ရာတွင် ပြုတ် ကျသေဆုံးခဲ့ပြီဟု ယူဆနေကြသည့် အမျိုးသမီးနှင့်ပတ်သက်၍ အထက်လမ်းပညာဆရာ ဘာပြောသလဲ ကျနော်ကိုယ်တိုင်က သွားဆေးတက်နေပါတယ်။ အလုပ်သင်ဖြစ်တော့မှာပါ။ ခုတတ်မြောက်လိုက်စားနေတဲ့လောကီ ပညာနဲ့ ငွေကြေးလုံးဝမတောင်းဘဲ စစ်ဆေးကုသပေးလျက်ရှိပါတယ်ခရိယာန်ဘာသာဝင် ၊အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာရယ်မခွဲခြားဘဲ လူအသက်ကယ်ကောင်းတော့ ..မြွေကိုက်လူနာ ၊ ရောဂါရှာမရဘဲ ဒုက္ခဖြစ်ငွေကုန်ဖြစ်တဲ့ ပယောလူနာတွေ ၊ ရောဂါကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ရူးသွပ်နေတဲ့သူတွေကို ကုသပေးတာအကုန်လူကောင်းပတိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုမှအဖြေရှာ မရ၊ သူ …